नेपालमा अब सैनिक शासनको आवश्यकता | Samajik Khabar
Home अन्य नेपालमा अब सैनिक शासनको आवश्यकता
नेपालमा अब सैनिक शासनको आवश्यकता
नेपाली सेनाहरु पनि कुटनीतिकमा शुन्य । राजनीतिक दलहरूका नेताहरू बाट समय समयमा सेनाहरुलाई विवादमा पार्ने काम पनि भएको छ ? सेनाहरुलाई हेपेर बोल्ने काम पनि भएको छ ? सेनाहरु आफै शासक बन्ने ठाउँमा सेनाहरु चुप किन ? प्रधानसेनापति, पृतनापति, जर्नेल, कर्णेल, मेजर, क्याप्टेन र सिपाही जो पनि शासक बन्न सक्नुहुन्छ तर आँट र हिम्मत हुन जरुरी छ ।
माओवादीहरुले पनि द्वन्द कालमा नेपाली सेनाहरुलाई सिध्याउन खोजेको नै हो । हालमा आएर पनि केही मन्त्री र नेताहरूले समय समयमा कहिले सेनाहरुको संख्या कम गर्ने भन्छन ? कहिले सेनाहरुको रेन्जर गण (बटालियन) हटाउनु पर्ने वा खारेज गर्ने भन्छन आखिरमा गर्न खोजेको के ?
सेनाहरुले थाहा पाउनुपर्ने कुरा मुलुक भन्दा ठूलो संविधान होइन । संविधान फेरि पनि बन्न सक्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु, सांसदहरू र नेताहरूबाट मुलुकमा के सहि भइ रहेकोे के गल्ती भइ रहेको छ भन्ने कुरा प्रमुख हो । तपाईंहरु आफै भन्नुस् के प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरू संविधान बमोजिम चलेका छन ? हाम्रो मुलुकमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको सहि सदुपयोग भएको छ र ? नागरिकहरुले सहि कामहरू गर्नका लागी प्रतिनिधिहरुलाई निर्वाचनमा चुनेर पठाएका हुन। जनताहरु बाट निर्वाचित हुँ भन्दैमा दुरुपयोग र मनपरि गर्न पाइन्छ ? भुकम्पको समयमा र कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा दुरुपयोग गर्ने हरुले अरु समयमा के बाँकी राख्लान ?
विक्रम सम्वत २०६२/०६३ को जनआन्दोलनको परिवर्तन पछि पनि राजनीतिक दलहरूका शीर्ष नेताहरूको कारण मुलुकले निकास पाउन सकेको छैन र हालसम्म मुलुकमा रहेको संक्रमणकालीन अवस्था, अस्थिरता तथा नेपालमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको दुरुपयोग भयो । सेनाहरु आफै शासक बन्न आवश्यक छ । यसकारण सैनिक शासनको आवश्यकता महसुस भएको छ ।
Previous articleभारतमा एकैदिन ६८ हजारमा कोरोना संक्रमण
Next articleअजीव राेग “काेराेना”